Mkpa ọ dị ire ahịa | Martech Zone
Ọ bụ ezie na teknụzụ na-enyere aka na teknụzụ gosipụtara 66%, 93% nke ụlọ ọrụ enwebeghị ike mejuputa usoro nkwado nke ire ere. Nke a na-abụkarị n'ihi akụkọ ifo nke nkwado ahịa na-adị oke ọnụ, ihe mgbagwoju anya itinye ma nwee ọnụego nnabata. Tupu ịbanye na uru nke ikpo okwu ahịa na ihe ọ na-eme, ka anyị buru ụzọ banye ihe nkwado ahịa bụ yana ihe kpatara o ji dị mkpa.
Gịnị Bụ Ahịa Kwadoro?
Dabere na Forrester Consulting, enyere nkwado ahịa dị ka:
Usoro, usoro na-aga n'ihu nke na-akwadebe ndị ọrụ niile na-eche ihu na ndị nwere ike ịnwe mkparịta ụka bara uru yana usoro ziri ezi nke ndị ahịa metụtara na ọkwa ọ bụla nke nsogbu nsogbu nke ndị ahịa iji bulie nloghachi nke ire ere sistemụ.
Gịnị Bụ “Azụmaahịa Na-enyere Aka” Na Kedu Ka Forrester si Ghọta ya?
Yabụ kedu ihe nke ahụ pụtara n'ezie?
Ọ bụrụ n’iche maka ndị ahịa gị n’ihe gbasara mgbịrịgba, chee na ị ga - ebugharị ndị na - ere gị n’ala site na mgbịrịgba mgbịrịgba gaa n’elu ya na ndị na - eme gị. Ebumnuche nke inye aka ahịa bụ ịkwaga ndị na-ere gị ahịa site na ala ruo n'elu iji mee ka ha bido ire dị ka onye na-eme egwuregwu kacha elu. Maka ndị na-ere ahịa ọhụrụ ma ọ bụ nke ọkara, ọ ga-ekwe omume na ha enweghị ihe ọmụma ma ọ bụ ikike iji mezuo ihe ngosi ahịa dabere na uru ndị ọkaibe gị na ndị ahịa ọ bụla na-eme. Inwe ezigbo nkwado teknụzụ na-enye ndị ọhụụ ọhụrụ na ndị ahịa gị ohere ịhụ ihe na-arụ ọrụ na ndị na-ere ahịa kachasị elu iji nyere aka bulie ahịa ha nke ọma. Na Mediafly, anyị na-akpọ nzụlite a nke nzukọ ahịa, Evolved Selling ™.
Gini mere iji choro ire ahia?
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị na-azụ ahịa agbanweela. Ruo 70% nke ozi B2B ndị na-azụ ahịa hụrụ na-achọpụta onwe ha n'ịntanetị, enyeghị ha site na onye na-ere ahịa. Mgbe onye na-azụ ahịa jikọtara ya na onye na-ere ahịa, atụmanya dị elu. Ha achọghị ịnụ ụda banyere atụmatụ na ọrụ ngwaahịa a. Kama nke ahụ, ha na-achọ ahụmịhe nke onwe na nke ịzụ ihe, na-enye ha ohere ịghọta ụdị nsogbu ịma aka pụrụ iche ngwaahịa gị ma ọ bụ ọrụ gị na-edozi yana otu ọ ga - esi nyere ha aka iru ebumnuche ego ha.
Na mgbanwe a na omume ndị na-azụ ahịa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịgafe ngosi ngosi PowerPoint na-ada ada. Kama nke ahụ, ọ dị ha mkpa ịnweta teknụzụ iji nwee ike ịkwado ebe ahụ, na-enye ezigbo ozi iji wulite ntụkwasị obi na onye zụrụ ha ma mechaa mechie azụmahịa ahụ. Teknụzụ nkwado teknụzụ na - eme nke ahụ.
Dabere na Forbes, ngwọta inyeaka ahịa bụ ntinye teknụzụ kachasị elu maka ịkwalite nrụpụta ahịa. Akụkọ data na-egosi na 59% nke ụlọ ọrụ nke karịrị ego enwetara - na 72% nke karịrị ha site na 25% ma ọ bụ karịa - nwere ọrụ enyere ahịa akọwapụtara.
Gini Ka Kwesịrị Ichere Ngwaahịa Na-eme?
Ezie na e nwere ọtụtụ ike na a ahịa nwee n'elu ikpo okwu, anyị, na Mgbasa ozi, kwenyere na usoro inye aka maka ịre ahịa ga-enye ndị na - ere ya ihe ndị a:
Ikike inweta ọdịnaya dị mfe, nke dị ugbu a gụnyere vidiyo, ngwa ọrụ mmekọrịta, ihe mmịfe maka ojiji na mkparịta ụka na ndị na-azụ ahịa.
Ikike ịmalite ngwa ngwa na mkparịta ụka ahịa iji zute mkpa ndị zụrụ ahịa, na -emepụta ahụmịhe nke onwe na nke pụrụ iche maka onye zụrụ ahịa.
Mmekọrịta mmekọrịta gụnyere ROI, TCO na ndị na-ere ahịa bara uru, na ndị na-ahazi ngwaahịa, na-ewepụta ntinye sitere n'aka onye zụrụ ahịa iji nyere aka duzie mkparịta ụka
Ikike iwepụta ezigbo oge site na isi mmalite dị iche iche, na-enyere aka idozi nsogbu pụrụ iche nke onye zụrụ ahịa
Data na nchịkọta banyere otu ọdịnaya si eme, ihe ọmụma data doro anya na-azụta iji kwalite azụmahịa na-aga n'ihu yana nghọta banyere otu esi azụ ahịa na-eri ọdịnaya ma na-eri ya site na atụmanya
Mmekọrịta na CRM iji nyere aka rụọ ọrụ na-ezighi ezi izute ozi nzipu ozi na ihe nrụtụ aka eji na nzukọ ndị gara aga
Ikike ndị a setịpụrụ ndị na-azụ ahịa n'ọkwa ọ bụla maka ịga nke ọma. Na nwute, a na-ahụta teknụzụ na-enyere ndị ahịa aka dị ka ihe dị oke ọnụ, nke gbagwojuru anya ma dịkwa oke egwu. Ma ọ dịghị mkpa ka. Ndị otu ahịa niile ma ọ bụ ụlọ ahịa na-ere ahịa enyemaka ha. Na enweghị njem otu, otu dị iche iche ga-ewepụta oge iji soro ndị na-eweta ọrụ ahịa ha mepụta ikpo okwu dị iche iche maka mkpa nke nzukọ ha.
Na nso nso, Mediafly nwetaiacha ọbara ọbara iPresent iji nye aka inye nkwado maka mmadụ niile. Site na nnweta a, anyị nwere ike iwepụta azịza ahịa ahịa zuru oke ma dị egwu maka azụmaahịa ọ bụla, na-ewepu ụgwọ ọrụ na mmejuputa nsogbu ụlọ ọrụ ọtụtụ ụlọ ọrụ na-atụ ụjọ mgbe ịzụrụ teknụzụ enyere aka.
Ọ bụrụ n'ị na-arụ ụka maka ịzụta teknụzụ enyere ndị ahịa aka mana ha na-eche maka mmejuputa iwu, itinye oge, wdg, mee obere ihe iji gbasoo ihe mgbaru ọsọ gị. Cheta na nke a bụ njem. Site na ijikọ teknụzụ na - akwado teknụzụ, ị nwere ike ịkwụsị ikiri ndị na - ere gị n’ahịa na - alụ ọgụ iji mezuo ebumnuche ha ma na - elekwa ndị otu ahịa gị niile anya.
Tags: arụmọrụ ọdịnayamwekota crmmgbasa ozingwaahịa nhaziọdịnaya ahịaarụmọrụ ọdịnaya ahịamkparịta ụka ahịaNkwado ire ahịa
Carson Conant bụ onye isi na Onye guzobere ahịa na-eweta azịza ahịa nke Chicago Mgbasa ozi. N'ịbụ onye tolitere n'ezinụlọ na-achụ nta ego, Carson abụghị onye ọbịbịa na ihe ịma aka na ụgwọ ọrụ nke iwulite ụlọ ọrụ site na ala ma na-agbakọta otu ndị nwere ọgụgụ isi iji mezuo ọhụụ ya. N'okpuru iduzi Carson, Mediafly amatala dịka Inc. ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa 5000 maka afọ ise, otu n'ime Ọrụ kachasị mma nke 2018, yana Ebe Kachasị Mma Ọrụ site na Crain's Chicago Business. Ndi oru Mediafly bu ndi ulo oru Fortune 500 nke ugbua tinyere PepsiCo, MillerCoors, Disney na Goldman Sachs.
Otu ndị isi ọrụ nwere ike isi lelee nchịkọta data iji meziwanye arụmọrụ